1. Inoana fa maro ny olona mety nanana kaonty Instagram taloha izay tsy ampiasainy intsony. Saingy tsy mikatona izany ary mamela irery ny kaontinao, noho izany dia mbola ao anaty Internet ny mombamomba anao sy ny sarinao. Noho izany, mba hanakanana ny hafa tsy hiditra amin'ny vaovao sy sary. Androany dia hanolotra dingana momba ny fomba hamafana ny kaonty Instagram isika. Amin'ny famafana ny kaonty Instagram dia azo atao amin'ny fomba 2: esory mandritra ny fotoana fohy ny kaonty Instagram ary hamafana azy mandrakizay. Raha te hahafantatra izay tokony hataonao ianao dia andao jerena.
2. Ahoana ny fomba famoahana vonjimaika kaonty Instagram
3. Ho an'ny famonoana vonjimaika ny kaonty Instagram dia hahatonga ny tompona kaonty sy ny mpanaraka ary ny besinimaro izy io. Tsy afaka mahita kaonty na manao hetsika amin'ny kaonty mihidy. Na izany aza, ny tombony an'ity karazana fanidiana kaonty ity dia ny ahafahanao manohy mampihetsika indray avy eo. Ireto ny dingana hanafoanana vonjimaika ny kaonty Instagram anao: Voalohany, mankany ianao https://www.instagram.com/ Amin'ny famonoana ny kaonty Instagram anao dia mila miditra amin'ny alàlan'ny tranonkala fotsiny ianao. Tsy afaka mikatona amin'ny fampiharana Instagram
4. Rehefa miditra amin'ny rafitra Tsindrio raha hiditra ny pejin'ny piraofilinao.
5. Avy eo tsindrio ny bokotra fanovana mombamomba.
6. Aorian'izay rehefa miditra amin'ny pejy fanovana mombamomba Azonao atao ny manindry bokotra iray. "Vonoina vonjimaika ny kaontiko"
7. Avy eo ianao dia halefa hisafidy antony hanafoanana vonjimaika ny kaontinao ary hiditra ny teny miafinao kaonty Instagram raha vantany vao nahavita ny zava-drehetra ianao, kitiho ny bokotra. "Kaonty fampiatoana vonjimaika vonjimaika" dia vita.
8. Ahoana ny fomba hamafana ny kaonty Instagram maharitra
9. Ny famafana maharitra ny kaonty Instagram anao dia ny hamafana mandrakizay ny kaontinao sy ny data rehetrao. Ary tsy azo averina indray Ireto ny dingana hamafana mandrakizay ny kaonty Instagram - Dingana voalohany alehanao >> https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny kaonty Instagram amin'ny alàlan'ny tranokala irery ihany - Avy eo tsindrio ny bokotra. "Vonoina .. (ny anaran'ny kaontinao) .." dia vita. Na izany aza, raha vao manindry ny bokotra hamafana kaonty ianao dia tsy ho voafafa avy hatrany ny kaontinao. Fa hafenina Ary hofafana amin'ny daty sy ora voatondro Raha tsy vaovao, dia hamafa ny kaontinao. Azonao atao ny miverina sy manafoana ny fanesorana ny kaonty. Fa raha lasa ny daty sy ora voatondro dia hofoanana mandrakizay ny kaontinao ary tsy azo averina.